Iiraan: Gantaallo cusub oo gaari kara Israel iyo Saldhigyada USA ee Gacanka – Kasmo Newspaper
Updated - February 14, 2018 4:52 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in uu haysto gantaallo cusub oo nooca ‘Ballistic’, kuwaas oo xambaari kara gumucyo Nuklear ah, isla markaana gaari kara Israel iyo Saldhigyada USA ee Gacanka.
Gantaalladan cusub, Qadr H iyo Fajr 5 waxaa lagu soo bandhigay dhoollatus military oo maalintii Axadda 11kii Febraayo ka dhacay Tehran, xuska sannadguuradii 39aad ee Kacaankii 1979kii.; gaar ahaanna midka Qadr H waxaa laga ridi karaa sagxado ‘Mobile’ ah iyo baro kala gedisan, wuxuuna ka tallaabi karaa habka difaaca gantaallada isaga oo ka dhuumanaya Radaarka.
Waa gantaal masaafadiisu tahay 2,000 oo Km oo ka dhigan nooca riddada dhexe ha yeeshee gaari kara Israel iyo fariisimmada Maraykanku ku leeyahay Gacanka, laakiin midka Fajr 5 waxaa loogu talagalay bartilmaameedyada dhow.
Waayadii dambe xiisad ayaa ka taagnayd Maraykanka iyo Iiraan ku saabsanayd barnaamijka gantaallada Iiraan, iyada oo Maamulka Trump ka baxay Heshiiskii ‘JCPOA’ (Joint Comprehensive Plan Of Action) ee lala galay Iiraan 14kii July 2015.
Heshiiskaas oo 5ta xubnood ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka iyo Jarmalku (P5+1) la galeen Iiraan si looga qaado cunaqabatayntii saarnayd, barnaamijkeeda Nuklearka dartiis.
13kii Oktoobar 2017 Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu cagta ku dhufanayo Heshiiskaas, isaga oo ku eedeeyay Iiraan in ayan xurmayn nuxurkii heshiiska.
20kii Oktoobar waxaa jawaab kulul ka bixiyay Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaani, isaga oo ku adkaystay in dalkiisu sii wadi doono samaynta gantaallada, difaac ahaa, taas oo aan ka hor imanayn shuruucda iyo heshiisyada Caalamiga ah.
Ugu dambayntii, 17kii Jennaayo, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan, Bahram Qassemi, ayaa caddeeyay in Tehran oggolaan doonin dal qur ah oo soo faragaliyo arrimaheeda gudaha iyo siyaasadeeda difaaca, oo si gaar ah loo xiganayo barnaamijka gaantaallada.